စာစုတို | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 28
မောင်ရင်ငတေ – အတွေးစတစ (ဆောင်းမနက်)
ဆောင်းမနက် 05:47 (ဓါတ်ပုံ မရငတ) မောင်ရင်ငတေ – အတွေးစတစ (ဆောင်းမနက်) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ ညက ခပ်စောစော သန်းခေါင်ယံမတိုင်ခင်မှာ စအိပ်ပျော်ခဲ့သဖြင့် တခါအိပ်လျှင် ခြောက်နာရီခန့်သာ အိပ်တတ်သည့် အကျင့် ကြောင့် ထင်သည်။ ဒီကနေ့မနက် မောင်ရင်ငတေ အိပ်ယာက ခပ်စောစော နိုးလာခဲ့သည်။ အမှောင်ထုထဲကနေ ထားနေကျ လက်ကိုင်ဖုန်းကို စမ်းရှာရင်း အချိန်ကြည့်မိသည်။ နာရီ ဂဏန်းတွေက 05:47 . … . ….. ခြောက်နာရီ မထိုးတတ်သေး . . . .. . . .. . . . .. . .....
မောင်လူရေး – ကျောင်းမနေကလေးများနှင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅ အခြေခံပညာရေးဥပဒေထွက်ပြီတဲ့။ များသောအားဖြင့် ပညာရေးဥပဒေတွေ က ကျောင်းနေကလေးများအတွက်သာ စဉ်းစားကြသည်။ ကျောင်းမနေကလေးများ အတွက် မစဉ်းစား။ ကျောင်းမနေ ကျောင်းတပိုင်းကလေးများ အတွက် သင်ကြားစရာ နေရာမရှိ။ ယင်းတို့နှင့် လိုက်ဖက်သော သင်ကြားရေးဌာနနှင့် ပုံစံမရှိ။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည်တွင် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသောကလေးများတွင် ကျောင်းနေနှင့် မနေမှာ ဆတူနီးနီးဟု ဆိုရမည်။ စာရင်းအင်းသေချာမကောက်ယူသည့်အတွက် ကျောင်းမနေကလေးများ၏ပညာရေးကဏ္ဍကို ကျောင်းနေကလေးများအ ပေါ်စဉ်းစားပူပန်သလိုမျိုး မရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏အကြီးအကဲများ သူဌေးသူကြွယ်များနှင့် အချို့လူလတ်တန်းစားတို့မှာပင် ကလေးငယ်များကို အိမ်ဖော်အဖြစ် ခိုင်း စေရက်ကြခြင်းက ကျောင်းမနေကလေးတို့၏အရေး စဉ်းစားမှုကို ပျောက်ကွယ်စေလေသည်။ ဒီရက်ပိုင်း အရွယ်နှင့်မမျှ အောင်နှိပ်စက်ခံရသည့်ကလေးသတင်းများဆိုလျှင် တပ်မတော်အကြီးအကဲတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေအိမ်မှချည်းဖြစ်...
အဲလိုထူး – လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း
အဲလိုထူး – လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၅ ဆောင်းဝင်လာတာနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ရမယ်လို့ ဘယ်သူမှမပြောပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လင်မယားကတော့ ဆောင်းဝင် တာနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ကြမယ် ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းက တော်တော်နဲ့မအေး။ နှင်းကိုလည်း တစက်တမှုံမှ မမြင် ရ။ မန္တလေးရဲ့လူထုဒေါ်အမာပွဲကတော့ အေးနေပြီ။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဒီဇင်ဘာရဲ့အစ၊ SWEET..DECEMBER လို့ စာတန်းတွေတက်လာပြီ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့လင်မယားလည်း နှိုးစက်နာရီကို မနက် (၅) နာရီသို့ ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတော့ တယ်။ စိတ်ရဲ့စေ့ဆော်တိုက်တွန်းမှုက အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ နှိုးစက်နာရီမအော်ခင် အိပ်ယာထဖြစ်ကြပါ တယ်။ ရာသီဥတုအခြေအနေက အနွေးထည်းဝတ်ပြီး ခေါင်းစွပ်ဦးထုပ်ကြီးဆောင်းရလောက်အောင် ချမ်းချမ်းတုံမနေပါဘူး။ နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရုံ အေးစိမ့်စိမ့်ကလေးရှိနေပါတယ်။ အိမ်မီးတွေ အပြည့်အစုံလင်းထိန်နေအောင်ဖွင့်ပြီး ခြံတံခါးပိတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပြင်လမ်းမပေါ်မှာ အလင်းကမပြည့်မစုံ...
မောင်လူရေး – အသံချဲ့စက်များ ဆိုင်များ ကားများ ဆိုက်ကားများ ဆိုင်ကယ်များ မြောင်းပုတ်များ ခြင်များ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၅ ယခုကထိန်ရာသီတွင် အသံချဲ့စက်ကိစ္စတော်တော်ပြောကြသည်။ မကြာခင်ပြီးစီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကာလတုန်းကလည်း အသံချဲ့စက်များ မိုးလုံးပွက်ညံခဲ့ကြသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထီဆိုင် ထီသည်စသည့်ဈေး ရောင်းသူများ၏ အသံချဲ့စက်အသံများ။ အသံချဲ့စက်သည် တောနှင့်မြို့ဟန်ရောစပ်မှုကြားတွင် အချို့သူများအတွက် နားသောတဆင်စရာဖြစ်နေပြီး အချို့သူများ အတွက် နားဒေါသသင့်စရာဖြစ်နေပြီ။ အသံလုံသော ဝင်းခြံကျယ်သောခန်းမတွင်း မကျင်းပ မပြုလုပ်သောပွဲမှန်သမျှတွင် အသံချဲ့စက်ပြဿနာရှိနေမည်သာ။ အသံမစဲပဌာန်းပွဲများ ဗလီဝတ်ပြုဆုတောင်းသံများ တရားဖွင့်သံများ အလှူခံမဏ္ဍပ်များစသည်ဖြင့် အသံတွေကြွယ်ဝလွန်း နေပေသည်။ ကိုယ့်ရပ်ရွာ ကိုယ့်ဧရိယာက လက်ခံနိုင်ပြီး အခြားသူများကို အနှောင့်အယှက်မရှိလျှင် ပြဿနာမဟုတ်ပေ။ ဆိုတော့ အသံချဲ့စက်ကိစ္စသည် လူနေမှုအခြေအနေတွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းကို အခြေခံသာစရိုက်သဘာဝတွေနှင့် အများကြီး...
သားဝင့်ကျော် – အိမ်ပြန်ချိန် နွေရောက်ပီလား
သားဝင့်ကျော် – အိမ်ပြန်ချိန် နွေရောက်ပီလား (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၅ နွေဦးကိုရောက်ချင်ကြရော့မယ်။ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၆ နွေဦးကို ရောက်ချင်ရော့မယ်။ အိမ်ပြန်ချင်ပီ အမေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဝေးတစ်နေရာ ရောက်နေရသူတွေအတွက် အိမ်ပြန်ချင်နေကြပြီပေါ့။ အမေကလည်းမျှော် အမေကပဲခေါ်နေပြီလေ…… ဖြစ်နိုင်ရင် အထုပ်အပိုးတောင်မယူဘဲ ဒုန်းဆိုင်းပြန်ချင်ကြသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပေါ့။ အိမ်ပြန်ပြီး မရှိအတူ ရှိအတူ ငပိရည်အလယ်တယ်ထား တို့စရာအစုံနဲ့ မိသားစုတွေစုံစုံညီညီ ကျိတ်လိုက်ရရင်…. မျှော်သူကလည်း မျှော် ခေါ်သူကလည်းခေါ် လက်မတို့ခင်ကထဲက ငိုချင်ရက်မျက်ရည်ခိုတဲ့သူကခိုနဲ့ ဒီနေရာမှာ အာဏာရှင်ခေတ်ကယောက္ခမလောင်း လေသံနဲ့ လူကြမ်းစကားဆိုရတော့မည်။ ”ဟဲ့ ညည်းအကောင် နိုင်ငံခြားပြန်က ကားပါမှာလား Tv ပါလား အောက်စက်ပါလား” ”မပါရင်တော့အေ အိမ်ပေါ်ခေါ်မတင်လာနဲ့ အိမ်သာပြည့်တာ အဖတ်တင်တယ်” ခုလည်း ဒီလေသံမျိုးပဲ...
အေအမ်တီ – ငါးတစ်ကောင်ရဲ့နွေတေး
အေအမ်တီ – ငါးတစ်ကောင်ရဲ့နွေတေး (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ ကျနော်က လမ်းတွေကိုချစ်တယ်။ နွေရာသီဖုန်လမ်းတွေဆို ပိုလို့ချစ်တယ်။ ကျနော် ခရီးတခုက ပြန်လာတိုင်း ကျနော်တို့မြို့ရဲ့ လမ်းတွေကို တခုတ်တရ ကြည့်မြဲ။ လမ်းဆုံ၊ လမ်းမွှာ၊ လမ်းသွယ်၊ လမ်းထောင့်၊ လမ်းကြား။ အခုလို ဧပြီ၊ မေဆိုရင် ကျနော် တို့မြို့လမ်းတွေ ဖုန်အလိမ်းလိမ်း။ ငယ်စဉ် ဖတ်စာအုပ်တွေကိုတော့ ကျနော်မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ကြယ်စုံတဲ့နွေရာသီ ဖုန် လမ်းတွေကိုတော့ အလွတ်ရနေမိတယ်။ လရောင်အောက်မှာ လူတိုင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပေမယ့်လည်း ကျနော့်ဘဝမှာ လ (၇) နွေ ကွယ်ခဲ့ဘူးတယ်။ လမ်း (၇) နွေ ငတ်ခဲ့ဘူးတယ်။ လငတ်တဲ့ကျနော်ဟာ သံတိုင်ကြားကနေပြီး လရောင်ကို ရေခွက်နဲ့ ကဲ့ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီလမထွက်တဲ့အရပ် ဒေသကနေ...
ညွန့်ထွေး – လှည့်လည် အလှူခံခြင်း အနုပညာ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅ တနေရာတည်းတွင် ကျောက်ချပြီး အလှူခံခြင်းထက် နေရာအနှံ့ လှည့်လည် အလှူခံခြင်းသည် ကောင်း၏။ ကထိန် အလှူခံကာလအတွင်း လူဦးရေသိပ်သည်းဆများသောရန်ကုန်မြို့အနှံ့တွင် အလှူခံမဏ္ဍပ်တို့ကို ပေါပေါများများ တွေ့ရသည်။ ထိုမဏ္ဍပ်များက မိုးလင်း မိုးချုပ် လော်စပီကာသံတညံညံဖြင့် ပရဟိတအကျိုးတော်ဆောင်ကြသည်။ ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်ကြကုန်သော သူတော်စင်များ အလှူငွေထည့်ဝင်နိုင်ကြရေးအလို့ငှာ အော်ချက်ထုတ် လှုံ့ဆော်ပေးကြသည်။ မုဒိတာပွားနိုင်ရေး၊ လှူတန်းချင်စိတ်ပေါ်လာရေးတို့အတွက် အလှူရှင်စာရင်းနှင့် မည်မျှ ထည့်ဝင်လှူတန်းကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ကြေညာပေးသည်။ ကြေညာချက်များအပြင် ကြားဖြတ်ကာလ သီချင်းများလည်း ဖွင့်ပေးသည်။ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍဟုလည်း ယူဆနိုင်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးပဲဆိုဆို၊ ပရဟိတလှုံ့ဆော်ရေးပဲပြောပြော … သေချာသည်ကတော့ လော်စပီကာ၊ ဆောင်းဘောက်တို့မှ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာသမျှမှ...
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) – လည်လွန်လွန်းလို့
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) – လည်လွန်လွန်းလို့ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ လည်လိုက်တာမှ ပန်ကာကျနေတာပဲ ဟုပြောသော စကားမျိုး၊ ဒီလူက ဂျင်ဗျ၊ ဂျင်ထက်လည်တဲ့လူ၊ တော်တော်ဖျံကျတဲ့လူ ဆိုတာမျိုးသည် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ကြားရဖန်များသော စကားများဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြောစကားမျိုး ခဏခဏ ကြားရလျှင် ထိုအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် မကောင်းတတ်။ တခါက မိသားစုထမင်းဝိုင်းတွင် အားလုံးစုံစုံညီညီစားသောက်နေကြသည်။ သားသမီးများအား မိခင်ဖြစ်သူမှ ဟင်းများကို ဝေပုံကျ ခွဲဝေပေးသည်။ ထို့နောက်တွင် မြိန်ရေရှက်ရေ အားပါးတရ စားသောက်နေကြချိန်၊ သားအလတ်မှ ဟင်းပေးပါဦးဟု တောင်း၏။ မိခင်က သတိပြုမိသဖြင့် ခုနလေးတင်ပဲ ဟင်းတွေ ပေးထားသေးတယ်၊ မကျန်တော့ဘူးလားဟု ဟင်းထပ်ထည့် မပေးသေးဘဲ မေးသော် ကုန်သွားပြီဟု ဖြေသည်။ တခြားသူတွေက မကုန်သေး။...
မောင်မောင်လတ်(ရွှေအင်းလေးစာပေ) – တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အပြီး ….
မောင်မောင်လတ်(ရွှေအင်းလေးစာပေ) – တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အပြီး …. (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကနေမဲအများစုအနိုင်ရပါတီက ကျန်ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေကို အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွက် သဘောထား ညှိနှိုင်းစကားပြောရမဲ့အစား မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ မရှုမလှရှုံးနီမ့် သွားခဲ့တဲ့ အာဏာရပါတီက လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့  တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ဆိုသတဲ့လား .. … ၊၊ လက်ရှိအာဏာတည်ဆဲ ..အသက်ဝင်ဆဲ အစိုးရအဖွဲ့ ဝင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ခုခံဖြေရှင်းနေပါစေ။ ကြုံခဲ့  ဆုံခဲ့  ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက ဒု နဲ့ ဒေး….ဆင်တူရိုးမားအဖြစ်တွေကလဲ မရေမတွက်နိုင်၊ အပြန်တရာမက ကြားရဖူးတဲ့ ပုံပြင်တပုဒ်...
ဆောင်းလူ – ဂေါက်သီး
ဆောင်းလူ – ဂေါက်သီး နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၅ ခုတလော .. ဂေါက်သီး ..ဂေါက်နေသည် …။ အိမ်တွင်ရှိသော .. ဂီတာလေးအား တသသလုပ်ကာ.. ဟိုကဒေါင် ဒီဂယောင်ဖြင့် .. ဂေါက်သီးတယောက် ဂဏှာမငြိမ် …။ ခုနောက်ပိုင်း ပိုပို၍ဂေါက်လာသည်ဟု ဂေါက်သီး ထင်မိသည် …။ ဂေါက်သီးလက်က နာရီတို့သည် .. သံပတ်ပေးမှ သွားသည် …။ ပင်နယံတို့သည် .. အချောထည်တိုင်းမဟုတ်တော့ …။ ခွေးသွားစိတ်တွေမှာ စိတ်တွေပဲ့နေသည်လုို့ ဂေါက်သီး ထင်မိသည်။ ဂေါက်သီးရင်ဘတ်က နှလုံးသားတို့တွင် ချောဆီမရှိသည့်အတွက် .. တကျီကျီဖြင့် အော်သံအား နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြားနေရသည် …။ ဂေါက်သီး ချောဆီ ထည့်လိုလှသည် ..။ ချောဆီဖိုးကား...
Page 28 of 38«1...2627282930...38»
ကျော်ကျော် (မြရည်စမ်း) ● အမှောင်မလွတ်သေးသည့် အတွေးတစ
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) - သတိ ... အန္တရာယ်က... လက်တကမ်းမှာ ....
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) - ပုတ်သင်ညို နဲ့ အနုပညာရှင်များ စာစုတို ၂ ခု